Afghanistan: Qarax dad ay ku dhinteen oo ka dhacay Masjid – Radio Daljir
Afghanistan: Qarax dad ay ku dhinteen oo ka dhacay Masjid
Oktoobar 18, 2019 1:26 g 0
Ugu yaraan 28 ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay masaajid ku yaalla dalka Afghanistan, xilli ay socotay salaaddi Jimcaha, sida ay saraakiil sheegeen.
Weerarkaasi ayaa imaanaya maalin un ka idb markii QM ay sheegtay in fowdada dalkaasi ka jirta ay gaartey heer aan la aqbali karin.
Qaraxa, oo sida ay goob joogayaal sheegeen sababay in uu masjidka soo dumo, ayaa ka dhacay gobolka bariga ku yaalla ee Nangarhar, waxana ku dhaawacmay 55 qof oo kale, sida uu xaqiijiyey afhayeen u hadlay maamulka gobolka Attaullah Khogyani, oo AFP la hadlay.
Ma jirto koox sheegatay mas’uuliyadda qaraxa, oo aan illaa iyo hadda la shaacin nooca uu ahaa.
Gobolka, ayaa waxaa a howl-gala kooxda Taliban iyo kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ah ee Daacish
Dagaal khasaare geeystay ka dhacay gobalka Hiraan